ny depiote voafidy tany Miarinarivo, Ravahimanana Guillaume, noho ny nahatontosa ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia andiany faha-16 teto Madagasikara. Voaporofo , hoy izy fa mahay mandray vahiny ny Malagasy ary manana ny soatoavina mampiavaka azy maneran-tany. Zava-poana ireny fanomanana sy fandraisana ny fihaonana noezahin’ny fanjakana natao ireny raha tsy teo isika vahoaka malagasy rehetra, hoy hatrany izy. Azo antoka hatreto ny hampandroso ny firenentsika manomboka izao, na teo aza ny resabe sy ny fanatsatsoana samihafa nataon’ny sasany hoy izy. I Frantsa izao dia efa hanome fanampiana mitentina 62 tapitrisa euros ary ny fanjakana Maraokanina dia mitondra ny tetikasa miisa 22. Sambany ho an’ny firenena Malagasy no nisy fihaonana telo miantaona lehibe nifanesy natao teto Madagasikara dia ny A.P.F, COMESA, ary ny FRANCOPHONIE. Afaka 168 taona vao mety hiverina eto Madagasikara indray ny Frankofonia.